Ukuba uneserver ye-macOS, uhlaziyo lwakho luya kuhamba ngokukhawuleza nge-MacOS High Sierra | Ndisuka mac
Iseva yeMacOS Sisicelo esifumaneka kwiVenkile kaMac Apple. Ngamafutshane, iyasivumela ukuba siguqule iMac yethu ibe ngumncedisi ukuze sabelane ngomxholo kwinethiwekhi. Sisicelo esihlawulelweyo, kwaye ixabiso laso li- € 21,99 kwivenkile yeApple, kodwa ilungile ukulawula idatha phakathi kwezixhobo. Ukusukela ngoku kuhlaziywa kweMacOS ePhakamileyo yeSierra, sinomsebenzi omtsha oya kusithintela ekukhutsheni i-GB ezininzi, kwizixhobo nganye. Umsebenzi uza kuba kukukhuphela ingxelo yenkqubo yokusebenza, emva koko ihanjiswe phakathi kwazo zonke iiMac.Ukuze senze oku kufuneka sisebenze yabelana ngokugcinwa kwecache.
Ukongeza, abafana baseCupertino bawukhanyisile umsebenzi kwisitayile sokwenyani seApple. Umlawuli wenethiwekhi kufuneka akhuphele ifayile kunye nohlaziyo, kodwa abanye abasebenzisi abaluboni naluphi na utshintsho. Oko kukuthi, njengesiqhelo, baya kuya kwiVenkile yeApple kwaye bathenge, umzekelo, iMacOS ePhakamileyo yeSierra. Umahluko usekwe kwinto yokuba, endaweni yokuba ikhutshelwe kwiiseva zika-Apple, ulwazi lufumaneka kuhlobo olukhutshelwe ngaphambili.
Konke oku kunokwenzeka enkosi kwinxalenye entsha yokwabelana nge-Cache, esinayo kwi-MacOS High Sierra. Ukufikelela kuseto, kufuneka:
Yiya e ukhetho lwenkqubo.
Ngoku khetha Yabelana.
Inketho yokugqibela kuluhlu olungasekhohlo ngu Ukugcinwa kwecache.
Ngokuzenzekelayo, kunjalo ukhubazekile. ukumakisha isikwere kusebenze umsebenzi.
Ngalo msebenzi, sinokwabelana ngohlobo olukhutshelweyo lwenkqubo yokusebenza, kodwa kunye nomxholo ongaphezulu, ukufikelela kwinethiwekhi yethu yasekhaya. Ngokukodwa:
Las Uhlaziyo lwe iTunes.
Las ukuthengwa okwenziwe kwiVenkile ye-iBook (ukhetho olululo lweencwadana okanye iitekisi)
Las Ukuthenga usetyenziso kwiVenkile yeMac Apple.
Umxholo we Ibhanti yeGaraji.
Indawo yokugcina yedatha ye iCloud, zombini iifoto kunye namaxwebhu.
Okokugqibela, ukuba unengxaki ngendawo ekuyo yonke le ngcaciso kwimemori yakho, ungaqwalasela indawo ephezulu. Ngale ndlela, owona mxholo mdala uya kucinywa. Unokukhetha kwakhona idrive yangaphandle yokugcina ulwazi owabelana ngalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ukuba uneserver ye-macOS, uhlaziyo lwakho luya kuhamba ngokukhawuleza nge-MacOS High Sierra